Xildhibaan Calasow oo ka hadlay Shaqa joojintii lagu sameeyay - Awdinle Online
Xildhibaan Calasow oo ka hadlay Shaqa joojintii lagu sameeyay
Xildhibaan Cabdullaahi Axmed Calasow ayaa ka jawaabay Shaqo joojin uu ku sameeyay gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug Maxamed Nuur Gacal, waxaana uu sheegay in tilaabada uu qaaday gudoomiyaha aysan aheyn mid sharci ah.
Waxaa uu sheegay in Guddoomiyaha uusan awood u laheyn in uu gunada ka jaro ama uu shaqada ka joojiyo laakiin uu ku fashilmay shaqadda baarlamaanka Galmudug.
Waxaa uu sidoo kale tilmaamay in uu xeerhoosaadka baarlamaanka Galmudug aysan ku qorneyn tilaabada Gudoomiye Gacal ayna la yaabeen baarlamaanka Galmudug.
Xildhibaanada baarlamaanka Galmudug ayaa si weyn uga soo horjeestay tilaabo gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug uu ka qaaday Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Galmudug.
Previous articleCaqabado RW Rooble ka hortaagan Magacaabista Golihiisa Wasiirada
Next articleDadku dhintay Gaari dad Shacab ah saarnaayeen oo la rasaaseeyay